I-LayKtion - I-Airbnb
Mueang Chiang Rai , Chiang Rai, Thailand
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguPantanasorn
I-STAYKTION idibene ngokulula phakathi kwendlu yohlobo lwe-Chateau kunye nokuhonjiswa kwale mihla kwase-Thailand kufutshane ne-Kok River, umlambo oyintloko weChiang Rai. Indawo ejikelezwe yindalo kunye nendawo epholileyo. Le ndlu ineendawo ezininzi ezisetyenziswa ngumntu wonke onokuya kuzo, ufunde uze uphole. Amagumbi ethu enzelwe ukuphucula igadi yakho entle (Hlala upholile) Ithala labucala (Indawo yokuhlala engaphantsi komhlaba) kunye negumbi le-Attic (Hlala ILOFT)
Ukuba ufuna ukuhlala uphumle apho kufikelelwa khona, iLayKtion yindawo ekhethekileyo nezolileyo yokuhlala nokuphola, ekwimizuzu nje eyi-5. ukusuka embindini wesixeko nemizuzu eyi-10. ukusuka kwisikhululo seenqwelo-moya kodwa kubonakala ngathi ikude kakhulu kwisixeko esiphithizelayo. Indlu yethu yabucala inamagumbi okuthi zava kunye nendawo evulekileyo yokuzonwabisa.
I-Wat Fangmin (iTempile) kunye nevenkile yokutyela ye-Baan Rim Nam.
Umbuki zindwendwe ngu- Pantanasorn
- Amagumbi amane akhethekileyo
- Zonwabise - Izinto eziyimfihlo ziza kuba nendawo kunye nomlambo